ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: စွန့်ပစ်ခံလာရသော နိုင်ငံရေးရိုးသားမှုနှင့် ချောင်ပိတ်ခံရသော မြန်မာပြည်
အသက်ဆုံးရှုံးသွားရတယ့် လူတွေကို အားနာနေမိတယ် ကိုပေါ။ မြန်မာပြည်ကြီးကို အာဏာရှင်တပိုင်း ဇတ်သွင်းကြတယ်ဆိုရင်တော့ သမိုင်းမှာမှတ်တမ်းဝင်ကြမှာပါပဲ။ ကိုယ်ယုံကြည်တာကို မမှိတ်မသုန်ဆက်ပြီး ရေးနေပြောနေတယ့် ကိုပေါကိုလဲ ကျနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပညာတတ်တွေ ဖြစ်ပါလျက်နဲ့မတွေးမမြင်တတ်အောင် ဖြစ်နေကြတာကိုတော့ ကျနော် စိတ်ပျက်နေမိတယ်။ Every country has the government it deserves.တယ့်။ အရင်တုန်းကတော့ မယုံဘူးကိုပေါ ကျနော်ခုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လက်ခံလာတယ်။ quasi-democracy ကိုလက်ခံတယ့်လူတွေ quasi-democracy နဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ပြောချင်တာတစ်ခုက သမ္မတကြီးနဲ့အစိုးရကိုဒီလောကလက်ခံနေကြတာ ဘာလို့ အလံတော်သစ်ကို ဘယ်စုစုဝေးဝေးမှာမှ မဝေ့ယမ်းကြပါလား။ Spain က သေသွားတယ် အာဏာရှင်ဟောင်း Franco ရယ့် စပိန်အလံလိုပဲ မြန်မာအလံသစ်ဟာ symbol of shame ဆိုတာ ကျနော်တို့ မသိစိတ်မှာ ရှိနေတာကို ဖုံးကွယ်နေကြမြင်တော့ စိတ်ထဲမကောင်းဘူး။
Did you listen Zagana's speech at LA, he had already mentioned that "Why Daw Aung San Su Kyi has to go for election". This is the best way we can find in this situation. Do you think NLD doesn't know the ground situation. Do you think NLD completely believe to Govt.
If you have better suggestion why don't you share or advise to NLD.
ဒီနေ့ဒေါ်စု ၄၅နေရာလုံးနိုင်ရင် ကိုပေါ ဘာ ပို့စမှ တင်မာ မဟုတ်။
တဝက်လောက် နိုင်ရင် ကိုဝတုတ် သို့ ၈၈ ဇော်မင်း တပုစ်၂ တင်ပါမယ်။
လုံးဝ မနိုင်ရင် ကိုပေါကိုယ်တိုင် ပျစ်၂နှစ်၂ (တွေ့ပြီ မှလား)လို့ ရေးတင်ပါမယ်။
ဒီအကွက်ကို စောင့်နေတာ ၂၂၆ရက်တောင်ရှိပြီလို့ ယူဆမိပါတယ်။ ပြည်သူ၁ယောက်အနေနဲ့ ဒေါ်စုရွေးကောက်ပွဲဝင်တာ ထောက်ခံတယ။် မျှော်လင့်ရတာ ဟာ မျှော်လင့်ချက်မရှိတာထက် ပိုနေပျော်ပါတယ်။ ဘာမှ မထူးတာထက် တခု၂ထူးဖို့ ပြည်သူတွေ မျှော်လင့်နေတာ ဒေါ်စုစည်းရုံးရေးခရီးစဉ်တွေမာ သူတို့ဘယ်လောက်အားပေးတယ်ဆိုတာမြင်နိုင်ပါတယ်။ (ဒီလူတွေကို တအိမ်တယောက် ထမင်းထုပ်နဲ့ ခေါ်ထားတာ မဟုတ်ပါ)
ကိုပေါ်လေသံက ၉၀တုန်းက နင့်ကိုရွေးပြီ:ပြီ ဘာမှဖြစ်မလာတာ နင်အသုံးမကျလို့လို့ပြောနေသလိုပါ။ ဒီလိုဆိုနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့တာဝန်ကို ခေါင်းဆောင်တယောက်ထဲကို ပုံချလိုက်သလိုပါ။ ပြည်သူ့အင်အားကို ယုံရမယ် ဘယ်လိုယုံရမလဲ ကျွန်မတို့တွေကို လမ်းပေါ်တက်ပြီ: အသေခံခိုင်းဦးမလို့လား။ ပြည်သူတွေက ဘယ်နေရာမာ ထပ်ပြီ:အင်အားပြရအုန်းမာလဲ ပြတော့ရော ဘာအကြောင်းထူးမလဲ ပြည်တွင်းမာ သေတော့ အဖမ်းခံရတော့ ကိုပေါတို့ ဇော်ဝင်းတို့ ဘာ လုပ်ပေးမာလဲ အမလေး စားဖို့တောင်အနိုင်နိုင် ကိုကျော်သူတို့အလုပ်ရှုပ်အောင်ကိုပေါပြောတဲ့ ပြည်သူ့အင်အား မပြပါရစေနဲ့
ကီးဘုတ်ပေါ်က စင်ကြားဖောကနေ ကျွန်မတို့ရဲ့ အနည်းငယ်မျှသော မျှော်လင့်ချကကလေးများကို ချေမွနေသော ကိုပေါသို့
I see this as the desperate act ofabunch of pygmies who thinks they are giants trying to throw some dirt at giants but ending up putting sand in own eyes. Shame on you and for you loving horse shit, do not think that you can promote to others. Pathetic!
ဒီ Post ရေးတဲ့သူကို( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို Interview လုပ်တဲ့) media တွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဗျူးသလိုမျိုးဗျူးစေချင်တယ်။ သူဘယ်လိုဖြေမလဲဆိုတာ အရမ်းသိချင်တယ်။Media တွေကို ဒေါ်စုတုံ့ပြန်သလိုမျိုးတုံ့ပြန်နိုင်တယ်ဆိုရင် ဒေါ်စုကို ဝေဖန်ထိုက်တဲ့ အရည်အချင်းရှိတယ်လို့ အမှတ်ပေးလို့ရပါတယ်။ န.အ.ဖ သတင်းစာတွေမှာ ဒေါ်စုကို ဆယ်စုနှစ်(၂)စုကျော်ဒီထက်ပိုပြီးရက်စက်တဲ့နည်းလမ်းတွေ၊အရေးအသားတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဘာဖြစ်လို့ ဒေါ်စုကိုပြည်သူကမမုန်းတာပါလဲ။ မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ဒီအသက်အရွယ်နဲ့ နိုင်ငံတကာကိုရင်ဘောင်တန်းပြီး ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်တုံ့ပြန်ရင်ဆိုင်ဖြေကြားနေတဲ့အမျိုးသမီးကတော့ မြန်မာနိုင်ငံအတိုင်းအတာနဲ့အမေစုကလွဲပြီးမတွေ့ဘူးသေးတာအမှန်ပါပဲ။ ကျွန်မ YIT 1995 intake ပါ။ 97 မှာ YITအရေးအခင်းထပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းပိတ်တယ်။ 98 မှာ ပြန်ဖွင့်၊ (၁၀) ရက်နဲ့ စာမေးပွဲစစ်၊ ၂၀၀၀ မှုာ ပြည်မှာ ပြန်ဖွင့်၊ စာသင်နှစ်(၂)နှစ်နဲ့ အတန်း (၃) တန်း ပြီးအောင်တက်ရပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာ ကျွန်မတို့ အဆင်ပြေသလို အလိုက်သင့်နေခဲ့ကြရတာပါ။ ကျောင်းပြီးတော့လဲ သူငယ်ချင်းတွေ ပြည်ပထွက်ခဲ့ကြတာ ကိုယ်လဲထွက်ချင်ပေမယ့် မိဘကလဲမတတ်နိုင်၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်လဲ ခရီးမပေါက်ခဲ့လို့ ဝန်ထမ်းဝင်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ အစိုးရပိုင်စက်ရုံကြီး(၁)ရုံမှာ အရာရှိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အစိုးရအကြာင်းမကောင်းရေးမယ်ဆိုရင် စစ်သားလူထွက်အရာရှိတွေအကြောင်းရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်မ ပိုပြီးပီပီပြင်ပြင်ရေးမယ်ဆိုရင်ရေးနိုင်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ၊ ဒီ Post ကို ရေးတဲ့သူက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Topic ကိုရွေးထားတာဆိုတော့ သူမရဲ့ လုပ်ရပ်ကို မမှန်ဘူးလို့ ရဲရဲယုံကြည်နေသူဆိုရင်တော့၊ မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး မြန်မာပြည်သူလူထုကို နဖုးတွေ့ဒူးတွေ့ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ပါ၊ ငါးမင်းဆွေလိုပေါ့ရှင်။
ပြည်ပရောက်နေတဲ့ကျွန်မရဲ့သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးကတော့ (ကျွန်မအပါအဝင်)ဒေါ်စုကိုအကြွင်းမဲ့ထောက်ခံကြတယ်ရှင်။ လောကမှာသူများကိုဝေဖန်ရတာလောက်လွယ်တဲ့အလုပ်မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်း မဖြစ်လာရကောင်းလား ဆိုပြီးတကယ်အလုပ်လုပ်ပြီး၊အရည်အချင်းရှိ၊အနစ်နာအပင်ပန်းခံ တဲ့ခေါင်းဆောင်(၁)ယောက်ကိုတော့ ဘာမှအသုံးမကျသလိုမျိုး ဝေဖန်တာကတော့ န.အ.ဖ လမ်းစဉ်ကို လိုက်တာပါပဲ။ ကျွန်မ comment လေးကိုဖော်ပြမယ်ဆိုရင် မနက်ဖြန် ကျွန်မထပ်ရေးပါအုံးမယ်။
ကိုပေါအနေနဲ့ တိုင်းပြည်အတွက် သူတို့တတ်အားသမျှလုပ်နေတဲ့ အန်တီစုတို့ကို ထိုင်ပြီးတိုက်ခိုက်နေမယ့်အစား ဘယ်လိုလုပ်သင့်တယ်..ကိုပေါဆီမှာ တိုင်းပြည်အတွက် အခုအန်တီစုရွေးထားတဲ့လမ်းထက် ပိုကောင်းမယ့်နည်းလမ်းဘာတွေ ရှိနေတယ် ဘာတွေဆက်လုပ်သင့်တယ် စသည်ဖြင့် တခုခု အကြံဥာဏ်ပေးတာမျိုးကိုပဲ ရေးပါလို့ အမာခံစာဖတ်ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ တောင်းဆိုပါတယ်....ခုကိုပေါ တင်နေသမျှဆောင်းပါးအားလုံးဟာ ကျွန်မတို့လို ကိုပေါရဲ့အတွေးအမြင်ကို လေးစားတဲ့စာဖတ်ပရိတ်သတ်အတွက် စိတ်ပျက်စရာတွေ ချည်းဖြစ်နေပါတယ်...ကိုပေါနားလည်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်......
I respect u.Most people worship her personally.they have no brain.U dont know how to make fllms but u have the right to critic.This is democracy.